Wararka - Dhab ahaantii miyaad taqaanaa Muraayada Dabacsan?
Muraayadda la adkeeyay ama la adkeeyay waa nooc ka mid ah muraayadaha badbaadada oo lagu farsameeyo daaweynta kuleylka ama daaweynta kiimikada si loo kordhiyo xooggiisa marka la barbar dhigo muraayadda caadiga ah. Kuleylka ayaa dusha sare ka dhigaya isku-xoqitaan iyo gudaha xiisad. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah waxay keenaan galaaska, markii la jajabiyo, inuu ku burburo jajabyo yar yar oo granular ah halkii uu ku kala bixi lahaa jajabyo jajaban sida muraayadda saxanka (dhalada annealed). Qeybaha granular ayaa u badan kuwa aan dhaawici karin.
Badbaadadiisa iyo xooggeeda awgeed, muraayad qaboojiye ah ayaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan oo dalbasho leh, oo ay ku jiraan daaqadaha gawaarida rakaabka, albaabbada qubeyska, albaabbada muraayadda dhismaha iyo miisaska, baakidhka qaboojiyaha, ilaaliyayaasha shaashadda taleefanka gacanta, oo ka kooban muraayadda rasaasta, maaskarada quusitaanka, iyo noocyo kala duwan oo saxanno ah iyo qalabka wax lagu kariyo.
Muraayadda dabacsan ayaa qiyaastii afar jeer ka xoog badan dhalada annealed (“caadiga ah”). Faa'iidada weyn ee lakabka gudaha inta lagu gudajiro soosaarka waxay dhalisaa culeys cadaadis ah oo dusha sare ee muraayadda ah oo lagu dheelitiray culeyska culeyska jirka ee muraayadda. Muraayad buuxda oo 6-mm qaro weyn leh waa inay lahaataa mid ugu hooseeya iskudubbar ah 69 MPa (10 000 psi) ama ciribtirsiin aan ka yarayn 67 MPa (9 700 psi). Si loogu tixgeliyo galaaska badbaadada, culeyska cadaadiska ee dusha sare waa inuu ka badnaadaa 100 megapascals (15,000 psi). Cadaadiska dusha sare ee kordhay awgeed, haddii muraayadda waligeed jabto waxay kaliya u jajabisaa qaybo yaryar oo wareeg ah oo ka soo horjeedda jajabyada fiiqan ee fiiqan. Sifadaani waxay ka dhigeysaa muraayad qaboojiye badbaado u leh codsiyada cadaadiska sare iyo qaraxyada.
Waa culeyska culeyska leh ee dusha sare leh ayaa siinaya muraayadda muraayadda xoog leh. Tani waa sababta oo ah muraayadda annealed, oo aan lahayn wax culeys ah oo gudaha ah, badiyaa waxay sameysaa dildilaacyo dusha sare oo microscopic ah, iyo maqnaanshaha cadaadiska dusha sare, xiisad kasta oo lagu dabaqo muraayada waxay sababtaa xiisad dusha sare ah, taas oo horseedi karta faafitaanka dillaaca. Mar haddii dildilaac bilaabo faafinta, xiisaddu waxay ku sii urursan tahay cirifka dillaaca, taasoo keeneysa inay ku faafto xawaaraha codka maaddada. Sidaas darteed, muraayadda annealed waa mid jilicsan oo u jajabisa qaybo aan caadi ahayn oo fiiqan. Dhinaca kale, cadaadiska cadaadiska leh ee ku jira muraayad qabow ayaa leh cilladda oo ka hortageysa faafitaankiisa ama ballaarintiisa.
Goynta ama shiidi kasta waa in la sameeyaa ka hor xanaaqa. Goynta, shiidi, iyo saamaynta fiiqan dabeecadda ka dib waxay u keeni doontaa galaaska jabka.
Qaabka culeyska ka dhasha xanaaqa ayaa lagu ogaan karaa adoo ka dhex daawanaya muraayadaha indhaha, sida muraayadaha muraayadaha oo kala duwan.
Muraayadda qallafsan ayaa la isticmaalaa marka xoogga, caabbinta kuleylka, iyo amniga ay yihiin tixgelinno muhiim ah. Gawaarida rakaabka, tusaale ahaan, waxay leeyihiin dhammaan saddexda shuruudood. Maaddaama ay ku keydsan yihiin dibadda, waxay ku xiran yihiin kuleyl joogto ah iyo qaboojin iyo sidoo kale isbeddel heerkulka ba'an sanadka oo dhan. Intaa waxaa dheer, waa inay iska caabiyaan raadadka yar yar ee ka yimaada burburka waddooyinka sida dhagxaanta iyo sidoo kale shilalka waddooyinka. Sababtoo ah burburka muraayadda waaweyn, ee fiiqan waxay soo bandhigi doonaan khatar dheeri ah oo aan la aqbali karin rakaabka, muraayadaha kulul ayaa loo isticmaalaa si haddii loo jajabiyo, jajabku u noqdaan kuwo qallafsan oo inta badan aan waxyeello lahayn. Muraayadaha hore ama muraayadda hore waxaa laga sameeyaa muraayad dahaaran, taas oo aan u burburi doonin jajab marka la jebiyo halka daaqadaha dhinaca iyo muraayadda dambe ay caadi ahaan yihiin muraayad qabow.
Codsiyada kale ee caadiga ah ee muraayadaha kulul waxaa ka mid ah:
Xarumaha ciyaaraha fudud
Albaabbada maydhashada iyo meelaha musqusha
Goobaha carwooyinka iyo bandhigyada
Taawarrada kombiyuutarka ama kiisaska
Dhismayaal iyo dhismeyaal
Muraayadda hareeraha ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa dhismayaasha shirarka aan la xakamaynin (sida albaabbada muraayadda aan xayndaabka lahayn), codsiyada qaabdhismeedka lagu rakibo, iyo codsi kasta oo kale oo khatar ku noqon kara haddii ay dhacdo waxyeellada aadanaha. Xeerarka dhismaha ee Mareykanka waxay u baahan yihiin muraayad qabow ama dahaadhay dhowr xaaladood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah nalalka cirka, albaabbada iyo jaranjarooyinka u dhow, daaqadaha waaweyn, daaqadaha oo aad ugu sii dhowaanaya heerka sagxadda, albaabbada wareegaya, wiishashka, looxyada dab-demiska, iyo meelaha u dhow barkadaha dabaasha.
Muraayadda Dabacsan ayaa sidoo kale lagu isticmaalaa guriga. Qaar ka mid ah alaabada guriga ee caadiga ah iyo qalabka isticmaala muraayadaha la shubay waa albaabada maydhashada bilaa qaab ah, miisaska dhalada muraayadaha, khaanadaha dhalada, galaaska armaajada iyo dhalada meelaha dabka lagu shito.
“Rim-tempered” waxay muujineysaa in aag xaddidan, sida qarka muraayada ama saxanka, ay xanaaqsan tahay ayna caan ku tahay adeegga cuntada. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira shirkado takhasus gaar ah leh oo bixiya xalka si buuxda u xanaaqsan / la adkeeyay cabbitaanka cabbitaanka kaas oo keeni kara faa'iidooyin siyaado ah qaab xoog iyo iska caabin kuleylka kuleylka ah. Wadamada qaar badeecadahan waxaa lagu cayimay goobo u baahan heerar waxqabad oo kordha ama leh shuruudo galaas badbaado leh adeegsiga daran awgood.
Muraayadaha dabacsan ayaa sidoo kale arkay isticmaalka sii kordhaya ee baararka iyo baararka, gaar ahaan Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia, si looga hortago in muraayadda jaban loo isticmaalo hub ahaan. Waxyaalaha muraayadda ah ee dabacsan ayaa laga heli karaa hudheelada, baararka, iyo maqaayadaha si loo yareeyo jajabka loona kordhiyo heerarka amniga.
Karinta iyo dubista
Noocyada qaarkood ee muraayadaha la shubay ayaa loo isticmaalaa karinta iyo dubista. Soo-saareyaasha iyo noocyada waxaa ka mid ah Glasslock, Pyrex, Corelle, iyo Arc International. Tani sidoo kale waa nooca dhalada ee loo isticmaalo albaabada foornada.
Muraayadda kuleylka leh waxaa laga sameyn karaa muraayadda annealed iyada oo loo marayo habka kuleylka kuleylka. Muraayadda waxaa la dhigayaa miiska wax lagu duubo, iyadoo la dhex marsiinayo foornada si fiican u kululeysa oo ka sarreysa heerkulka kala guurka ee ah 564 ° C (1,047 ° F) illaa 620 ° C (1,148 ° F). Muraayadda ayaa markaa si dhakhso leh loogu qaboojiyaa hawlo hawleed khasab ah halka qaybta gudahana ay xor u tahay socodka muddo gaaban.
Nidaamka adkeynta kiimikada ee beddelka ah ayaa ku lug leh ku qasbid lakabka dusha sare ee muraayadda ugu yaraan 0.1 mm qaro weyn oo la isku rogo iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga ion ee ion sodium ee dusha muraayadda leh ion potassium (kuwaas oo 30% ka weyn), iyada oo galaaska lagu shubo qubayska Nitrate-ka la dhalaaliyay. Kiimikada adkaanta waxay keentaa adkaansho kordhay marka la barbar dhigo kuleylka kuleylka waxaana lagu dabaqi karaa walxaha muraayadaha ee qaababka isku dhafan.
Muraayadaha dabacsan waa in la gooyaa si loo qiyaaso ama loo cadaadiyo inay qaabeeyaan ka hor xanaaqa, dibna looma shaqeyn karo mar haddii la qaboojiyo. Nadiifinta geesaha ama godadka qodista ee muraayadda ayaa la sameeyaa ka hor inta hawsha xannuunku bilaabmin. Sababtoo ah culeysyada isku dheelitiran ee ku jira muraayadda, waxyeellada qayb kasta waxay ugu dambayntii keenaysaa in muraayaddu u jajabto qaybo xajmi yar yar leh. Muraayadda ayaa u nugul inay jabto sababo la xiriira dhaawac ka soo gaadha cidhifka muraayadda, halkaasoo culayska culaysku uu ugu weyn yahay, laakiin kala-daadashada ayaa sidoo kale dhici karta haddii ay dhacdo saameyn adag oo ku dhex jirta muraayadda muraayadda ama haddii saameyntu isku urursan tahay (tusaale ahaan, garaacista muraayada dhibic adag).
Isticmaalka muraayada la shubay waxay sababi kartaa khatar amni xaaladaha qaarkood sababtoo ah u janjeeraha muraayada inuu gabi ahaanba ku burburo saamaynta adag halkii uu kaga tagi lahaa jajabka daaqada.
Dusha sare ee muraayadda la shubay ayaa soo bandhigaysa mawjadaha dusha sare ee ay sababaan taabashada roogayaasha fidiya, haddii lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo nidaamkan. Wajigan waa dhibaato weyn oo soo saarista unugyada dhuuban ee qoraxda. Habka muraayadda sabeynta ayaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo xaashiyo qaloocsan oo hooseeya oo leh dusha sare oo siman oo isbarbar socda si loogu beddelo codsiyada kala geddisan ee kala duwan.
Ciladaha 'Nickel sulfide' waxay sababi karaan jabitaan iskiis u dhaca oo galaas qaboojiya sannado kadib soosaarideeda.